China Sodium Hypochlorite jenareta fekitari uye bhizimisi | Jietong Yemvura Kurapa Technology
Membrane electrolysis sodium hypochlorite jenareta imuchina wakakodzera wekumwa mvura disinfection, kurapwa kwemvura yakasviba, hutsanana uye denda rekudzivirira, uye kugadzirwa kwemaindasitiri, iyo inogadzirwa neYantai Jietong Water Treatment Technology Co, Ltd., China Water Resources uye Hydropower Research Institute, Qingdao Yunivhesiti, Yantai University uye mamwe masangano ekutsvagisa nemayunivhesiti. Membrane sodium hypochlorite jenareta yakagadzirirwa uye inogadzirwa neYantai Jietong Water Treatment Technology Co, Ltd. inogona kuburitsa 5-12% yakakwira yekumanikidza sodium hypochlorite mhinduro ine yakavharwa chiuno chekugadzira zvizere zvoga mashandiro.
Iyo yakakosha musimboti we electrolytic reaction ye membrane electrolysis sero kushandura simba remagetsi kuita chemakemikari simba uye electrolyze brine kuburitsa NaOH, Cl2 uye H2 sezvakaratidzwa pamufananidzo uri pamusoro. Mukamuri yeanode yesero (kurudyi kwemufananidzo), brine inoiswa ion muNa + naCl- muchitokisi, umo Na + inofamba ichienda kukamuri yekathode (kuruboshwe kwemufananidzo) kuburikidza neiyo ionic membrane iri pasi chiito chemubhadharo. Iyo yepazasi Cl inogadzira klorini gasi pasi peodic electrolysis. Iyo H2O ionization mukamuri yekathode inova H + uye OH-, umo OH- yakavharirwa neyekusarudzika cation membrane mukamuri yekathode uye Na + kubva kune anode kamuri inosanganiswa kuita chigadzirwa NaOH, uye H + inogadzira hydrogen pasi pecathodic electrolysis.
● Indasitiri yeklorini-alkali
● Utachiona hwemuti wemvura
● Kuchenesa mbatya kugadzira chirimwa
● Kudhirowa kune yakaderera concentration yakashanda chlorine yeimba, hotera, chipatara.
8toni / zuva 10-12%
200kg / zuva 10-12%
Pashure: Brine Electrolysis Pamhepo Chlorination System
Zvadaro: 3tons Sodium Hypochlorite jenareta
Chlorine Uye Sodium Hypochlorite jenareta
Jenareta yeSodium Hypochlorite
Sodium Hypochlorite Solution jenareta
Tsananguro Iyi ndiyo yepakati saizi sodium hypochlorite inogadzira muchina kuburitsa 5-12% sodium hypochlorite blekning solution. Yekukurumidza Nhoroondo Nzvimbo Yekutangira: China Brand Zita: JIETONG Warranty: 1 Year Kugona: 5tons / zuva sodium hypochlorite jenareta Hunhu: yakagadziriswa Nguva yekugadzira: 90days Chitupa: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 ...
Tsananguro Iyi iri yepakati saizi sodium hypochlorite inogadzira muchina kuburitsa 5-6% sodium hypochlorite blekning solution. Yekukurumidza Nhoroondo Nzvimbo Yekutangira: China Brand Zita: JIETONG Warranty: 1 Year Kugona: 3tons / zuva sodium hypochlorite jenareta Hunhu: yakagadziriswa Nguva yekugadzira: 90days Chitupa: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 ...
Ro Desalination Maitiro, Ro Mvura Sefa Spare Zvikamu, Mvura Yegungwa Kumvura Yekunwa Machine, Ro Zvakanaka Mvura Kuchenesa Sefa, Nyanzvi Yemvura Yekuchenesa System, Sodium Hypochlorite System Dhizaini,